एम्बुलेन्स भाडा तिर्ने पैसा नभएपछि ठेला नै एम्बुलेन्स:: Mero Desh
एम्बुलेन्स भाडा तिर्ने पैसा नभएपछि ठेला नै एम्बुलेन्स
Published on: २४ जेष्ठ २०७७, शनिबार १३:४८
राजविराज : सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका–२ का शुकदेव रामले बिरामी छोरा सुरेशलाई बयलगाडामा राखेर अस्पताल पुर्याएका छन्। लकडाउनमा गाडी नचलेको र एम्बुलेन्सको खर्च तिर्ने अवस्था नभएपछि रामले ठेलामा राखेर छोरालाई अस्पताल लगेका हुन्। उनले ठेला एक
छिमेकीसँग मागेको बताए। लकडाउनका कारण गाडी चल्न छाडेपछि सप्तरीको ग्रमीण भेगका बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न समस्या भएको छ।
शनिबार दमको बिरामी ७५ वर्षीय मो. मजिदलाई ३ किलोमिटर टाढा राजविराज ९ मलेठस्थित घरबाट उनको छोरा मजबुल र बुहारी रेशमाले ठेलामै राखेर उपचारका लागि स्थानीय गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल पुगेका हुन्। चर्को घाममा असिन पसिन भएर पालैपालो ठेला धकेलिरहेका पती पत्नीको अवस्था देखेर केही सहयोगीले अस्पतालसम्म पुर्याउन सहयोग गरेका थिए।
लामो समयदेखि बिरामी रहँदै आएको बाबुको उपचारमा भएका सबै पैसा खर्च भई सकेको सुनाउँदै उनका छोरा मो. मजबुलले भने, ‘लकडाउनका कारण हातमुख जोडनै समस्या भइसकेको छ, दैनिक ज्याला मजदुरी गरी परिवारको लालन पालन गर्ने हामी जस्ता गरिबले एम्बुलेन्सको भाडा कहाँबाट तिर्नु ?’
यो समस्या मजिद र शुकदेवको मात्र होइन। गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल, छिन्नमस्ता अस्पताल, अनार भुवनेश्वर अस्पताल तथा विभिन्न प्राइभेट क्लिनिक अगाडि देखिन्छ।
तत्काल अस्पताल पुर्याउनुपर्ने गरिब असहाय बिरामी र उनका आफन्तले पैसाको अभावकै कारण एम्बुलेन्स भाडा लिन नसकिएको बताएका छन्। लामो समयसम्म लकडाउन कायम रहेर गाडी चल्न छाडेपछि एम्बुलेन्स भाडा तिर्ने पैसा नभएका हामी गरिब असहाय बिरामीका लागि अहिले ठेला नै एम्बुलेन्स बनेका छन्।